Skypecast Nifanaovana Tamin’i Markus Beckedahl Avy Amin’ny Netzpolitik Nahazo ny Bilaogim-Pahafahana · Global Voices teny Malagasy
Skypecast Nifanaovana Tamin'i Markus Beckedahl Avy Amin'ny Netzpolitik Nahazo ny Bilaogim-Pahafahana
Voadika ny 02 Janoary 2018 19:01 GMT
(Tamin'ny 29 jona 2005 ny lahatsoratra tamin'ny teny anglisy)
Ny Skypecast Global Voices androany dia nifanaovana tamin'i Markus Beckedahl, bilaogera sady mpikatroka alemà, mpanoratra ao amin'ny Netzpolitik: bilaogy amin'ny teny alemà miresaka teknolojia open source, zon'ny mpisera aterineto ary ny fahalalahana miteny ao amin'ny tontolontsibera. Iray amin'ireo fito nahazo loka tamin'ny Freedom Blog Award taona 2005, izay tohanan'ny Reporters Without Borders izy.
Filoha sady mpiara-manorina ny ONG mpiaro ny zo nomerika Netzwerk Neue Medien (Tambajotra Media Vaovao), fikambanana iray mpikambana ao amin'ny Fisantarana Eoropeana Misahana ny Zo Nomerika i Markus. Ny orinasany indray dia ny Newthinking Communications .
Nanomboka ny bilaoginy i Markus mba hisarihana ny saina amin'ny resaka zon'olombelona sy ny fahalalahana miteny ao amin'ny tontolontsibera, lohahevitra izay heveriny ho tsy taterin'ny fampitam-baovao mahazatra araka ny tokony ho izy. Nilaza izy fa hanoratra bilaogy amin'ny teny anglisy tsy ho ela sady nandrisika ny bilaogera manerantany hanandratra izany fotokevitra izany.
Henoy ato ny antsafa (27 min, 13MB).